Tale jeneralin’ny Bianco : “Mampahalemy ny Bianco ny fisian’ny tsimatimanota” | NewsMada
Tale jeneralin’ny Bianco : “Mampahalemy ny Bianco ny fisian’ny tsimatimanota”
Par Taratra sur 28/05/2016
Nitondra fanazavana momba ny resaka tsimatimanota ny eo anivon’ny Bianco. Nambaran’ny tale jeneraliny fa mitondra any amin’ny fahalemen’ity rafitra iray ity izany.
“Fahalemen’ny ady amin’ny kolikoly eto amintsika ny fisian’ny tsimatimanota. Raha tsy misy ny fahatahorana ny rafi-panenjehana ny kolikoly ny olona, mbola sahy manao foana.” Io ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Bianco, Andriamifidy Jean-Louis, tamin’ny mpanao gazety teny Anosy, omaly.
Mila vokatra haingana ny ady amin’ny kolikoly: tena migadra sy voasazy izay manao. Tena mampahalemy ny rafitra rehetra iadiana amin’ny kolikoly, na ny Bianco aza, ny tsimatimanota: tsy atahoran’ny olona intsony, fa tsy miditra am-ponja izay mahakarakara tena ao ambadika.
Eo am-pamotorana ny fitorian’ny Afo sendikaly
Hanao famotorana ny Bianco ny amin’ny fitorian’ny Afo sendikaly hoe gaboraraka amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana ny Bianco, araka ny nambarany. Raha mitombina ny fanaovana fitoriana, haterina eny amin’ny fitsarana izay tompon’ny teny farany ny raharaha. “Tsy misy olona ambonin’ny lalàna eto amin’ny firenena”, hoy izy.
Na izany aza, nambarany tamin’ny Afo sendikaly fa mila atao ao anatin’ny filaminana ny ady amin’ny kolikoly. Ny mpanao kolikoly, na mpitondra na mpanohitra: samy manana ny tombontsoany ikorontanan’ny firenena mba hahafahany mangalatra. Na fananam-panjakana io, na harem-pirenena…
“Moramora ny mangalatra rehefa mikorontana ny firenena”, hoy ihany izy. Efa misy olona voaantso tao anatin’ny raharaha nanaovan’ny Afo sendikaly fitoriana, ary mbola mitohy ny famotorana.
Tsy misy resaka andramena ny tany Singapour
“Be dia be ny fomba nandikana ny fiarahako tamin’ny filoham-pirenena tany Singapour”, hoy izy. Nijery ny rafitra iadiana amin’ny kolikoly sy ny fahombiazan’izany izy ireo, araka ny fanazavana. Mba hijerena izay fomba haingana iadiana amin’ny kolikoly eto amintsika izany.
Tsy niresaka andramena tamin’io rafitra izy ireo. Tsy io rafitra io no naka ny andramena, fa sampandraharaha hafa. Mandeha amin’ny fitsarana any an-toerana ny raharaha. Fanajana ny fahaleovantenan’ny fitsarana no tsy nanatonana sy tsy niresahana io fitsarana io.
Manahirana ny depiote tsy mbola henoina, fa efa vita ny amin’ny mpandraharaha, raha ny raharaha kolikoly eny amin’ny Antenimierampirenena.